China isibambo Strongman sandbag ifektri kanye nabaphakeli | Feiqing
Isibambo sethu se-strongman sandbag senziwa ngokususelwa kusaka le-strongman, sithuthukisa ukwakheka ukuze sisebenzise kalula. Lo mklamo omusha wenza isibambo se-strongman sandbag esinemisebenzi ethile yokuphatha isikhwama samandla. Ungaphatha, uphakamise, uhambise isikhwama se-strongman kalula.Sbags zingathululwa bese zigcwaliswa kabusha kwenye indawo yokuzivocavoca, inkundla, ipaki, njll.
I-Handle Strongman Sandbags iyatholakala ngosayizi abangama-50lb-150lb, ungakhetha usayizi njengoba kudingeka.Yenziwe ngezinto zenylon eziyi-1050D Cordura 100%, uziphu we-YKK. Isandbag ngayinye inesikhwama esihlukile sokugcwalisa esinokufakwa okuthe xaxa kukaziphu kanye ne-hook-and-loop-ukuqinisekisa ukuthi izinto zokugcwalisa zihlala ziqukethe ngokugcwele njengoba usebenza kuhlobo lwakho lwemithi. Ukuvulwa kwegobolondo leSandongman sandbag nge-YKK uziphu, kungavimbela ukuqhuma kwesikhwama.
Uyacelwa uqaphele: Isisindo esilayishwayo seStrongman Bag sincike kokuminyana nosayizi wezindaba ezisetshenziswayo. Imidiya ethile ingadala ukuthi isisindo sonke sesikhwama sibe sikhulu noma singaphansi komthamo wesisindo obekiwe Ngenxa yemvelo yendwangu nokusetshenziswa okuqondisiwe, izikhwama zeStrongman zinganweba ngokuhamba kwesikhathi ngokusetshenziswa. Ngokwengeziwe, lezi zikhwama azigcwaliswanga.
Usayizi we-4.Custom: 50lb-150lb.
Langaphambilini Izinkuni Zezinkuni
Olandelayo: Isikhwama somthwalo osindayo-A
I-Handle Training Sandbag